Midowga Afrika oo Bayaan ka soo saaray hadal ka soo yeeray Donald Trump | Baydhabo Online
Midowga Afrika oo Bayaan ka soo saaray hadal ka soo yeeray Donald Trump
Wadamada Midowga Afrika ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Wadanka Mareykanka Donald Trump inuu ka laabto hadal gaf ahaa oo la sheegay inuu u adeegsaday wadammada dhaca Qaaradda Afrika,islamarkaana uu raaligelin hadalkaasi ka bixiyo,kadibmarkii caro xoogan ay hadalkiis aka muujiyeen bulshooyinka Afrika kunool.
Midowga Afrika ayaa soo saaray Bayaan adag oo ay ku dhaleeceynayaan hadalka gafka ah ee madaxweyne Trump,waxaana sidoo kale ay Bayaan kan uu Midowga Afrika ku muujiyay sida uu uga caraysan yahay hadallada gafka ah ee loo geystay.
Sidoo kale waxaa ay xuseen in sharaf dil ku tahay arrintaasi,qadarinta Mareykanka uu siin jiray kala midab duwanaanshiyaha,taasi oo sameyn weyn yeelatay,Wakiilada Midowga Afrika ee ku sugan caasimada Mareykanka ee Washington, ayaa muujiyay sida ay “uga xun yihiin, ugana careysan yihin oo ay u diidan yihiin” hadalkii la sheegay inuu kasoo yeeray Trump, taasi oo ay ku sheegeen inay xaqiijineysa in maamulka Mareykanka uu si qalad ah u fahmay qaarada Afrika.
War ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda ee Dalka Botswana ayaa lagu sheegay in dalkaasi uu u yeertay safiirkiisa ee Maraykanka, waxa ayna hadalka madaxweyne Trump ku tilmaantay mid aanan loo dulqaadan karin oo qeyru mas’uulnimo ah,waxaana arrintani ay dhalinaysaa khilaaf diblomaasiyadeed ooh or leh.
Sidoo kale Wasaaradda arrimaha dibadda ee Botswana ayaa sheegtay inay rajeyneyso in dadka Mareykanka aysan la qabin madaxweyne Trump fikradaan ka dhanka ah dalalka Afrika.
Dhanka kale war kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in erey bixinta uu isticmaalay ay ka duwanayd tan ay warbaahinta faafisay,taasi oo muujinaysaa in Trump uu goor dambe dareemay talaabada uu ku dhaqaaqay.